19 UYILO LWEKHITSHI ENCINCI YANAMHLANJE - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi 19 Uyilo lweKhitshi eNcinci yanamhlanje
19 Uyilo lweKhitshi eNcinci yanamhlanje
Apha sibonisa iintlobo ezahlukeneyo zoyilo lwangoku lwekhitshi emhlophe kubandakanya iindlela ezahlukeneyo zokuyilwa, ikhabhathi kunye nokugqitywa.
Nokuba kungakanani na ixesha, uyilo lwentshukumo okanye isitayile, umhlophe awuzange uphume kwisitayile. Ukuguquguquka kunye nobuhle bomhlophe kubonakaliswe ukuba abuphelelwa lixesha kwaye kulula kakhulu ukuba ubuyekeze kwaye utshatise nawuphi na umbala.
I-White ihlala inqwenelwa ukukwazi kwayo ukwenza indawo ibonakale ilula kwaye ikhanya ngakumbi, ngenxa yokukwazi kwayo ukubonisa ukukhanya. Kwimeko yangoku, oku kufanelekile ngakumbi kwizithuba ezincinci, njengoko kunika umbono wendawo enkulu. Esinye isizathu kukuba umhlophe ubonakala ucocekile, wenza ukuba ubonakale lula emehlweni, kwaye ujongeka umhle xa udityaniswe neminye imibala, iipateni kunye nezinto ezenziweyo. Ukuphela kwendlela yesiqhelo xa usebenzisa umhlophe, kukuba ubumdaka bubonakala ngokulula kumphezulu wawo, ke kufuneka uqinisekise ulondolozo olufanelekileyo. Ikwayinto ekhangeleka ngathi iyabanda okanye iyadika, ngakumbi xa kungabikho zintlobo-ntlobo zee-shades kunye nemibala emhlophe esetyenzisiweyo.
Njengoko ikhitshi lihlala lilungiswe ngokusisigxina ekhayeni- lisetyenziswa rhoqo, kodwa kunqabile ukuba lithathelwe indawo okanye lilungiswe kwakhona - ikhitshi kufuneka liguquguquke kwaye likwazi ukumelana novavanyo lwexesha ngokomgangatho kunye nesitayile. Oku kwenza ukuba kusetyenziswe okumhlophe ukulungiselela ikhitshi. Ayikho i-frills, ayikho-miss kunye nombala okhuselekileyo wokukhetha, oya kuqinisekisa ukuba uyilo oluhle lwekhitshi. Iikhitshi zala maxesha ingakumbi zithanda ukusebenzisa ezimhlophe ekhitshini, kwaye apha ngezantsi yimizekelo emihle ye Uyilo lwangoku lwekhitshi emhlophe :
I-medley yezixhobo zendalo zale mihla yenza ukuba le khitshi imhlophe yonke ibe nobushushu kunye nobuntu. Iikhabhathi zemodyuli zisebenzisa ukugqitywa kwepeyinti emoto emhlophe edityaniswe neetafile zentsimbi ezingenasinxibo, eyenza indawo epholileyo, yokulala kunye nesiseko esikhanyayo. Ukongeza ngobuqili imvakalelo efudumeleyo kwisithuba, ibhloko enkulu yokhuni oluqinileyo lomthi lwalusetyenziswa kwitafile yebar.
isimemo somtshato ngamagama abazali abaqhawule umtshato
Iikhabhathi zekhitshi zala maxesha Ngokuqhelekileyo zenziwa kusetyenziswa izinto ezenziwe ngabantu ezinjengeplastiki, isinyithi, iglasi okanye ilaminathi. Iikhabhathi ezininzi zekhitshi zale mihla zibonisa iingcango zesitayile esine-ornamentation encinci. Imiphezulu yeeflethi ezisicaba zisetyenziswa kugxininiso kuyilo olucocekileyo.
Umhlophe ulunge kakhulu kwizithuba ezincinci ezinje ngalo mzekelo. Oku kumxinwa ikhitshi lale gali yanamhlanje ijongeka ngathi yindawo ekuyo, njengoko isebenzisa umbala omhlophe omhlophe kunye nokugqitywa kokubonisa.
Ndinxiba esayizi yantoni iringi
Dlala ujikeleze ngokudibanisa ukukhanya kunye nombala kwaye ufumane ubukhulu kunye nokujonga okunokubakho ngeekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini. Olu luyilo lusebenzisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwe-LED ukukhanyisa ngaphantsi kwetafile, kuyinika ukukhanya okuqaqambe kakhulu. Iikhabhathi ezimnyama ezingwevu zazisetyenziswa ngokudibeneyo nomhlophe ukuyinika ubunzulu ngakumbi.
Eli khitshi lincinci limhlophe linikezela usingasiqithi omxinwa wesithuba esongezelelweyo sokubala kunye nezixhobo ezifihlwe ngasemva kwekhabhinethi. Imiphezulu yeetafile yakhiwe ngombala oqinileyo ongwevu kwaye yahluke ngokuchasene nokubuyela umva kombala omnyama ongwevu. Umgangatho okhanyayo weplanga ubaleka kwindawo yonke yasekhitshini ukuya kwindawo yokutyela ucola uyilo oluhambelanayo kunye nesitayile.
Omnye umzekelo wekhitshi lokuhamba ngegalali usebenzisa iikhabhathi ezimhlophe eziqaqambileyo eziphezulu. Ukugqitywa okungaginyisi mathe kukhangeleka ngakumbi kungenasiphelo kusetyenziswa imivalo yokubamba eqhubekayo. Ukusetyenziswa kwetafile ye-quartz emdaka kunye nemarble emdaka kunceda ukongeza ubushushu kunye nokuthungwa ekhitshini elincinci.
Le khitshi icwecwe inika umzekelo olungileyo wendlela esinokuthi sandise ngayo iindawo ezincinci zoyilo lwekhitshi. Ngenxa yendawo encinci yomgangatho, i Ikhitshi elimile L (nangona igobile kulo mzekelo) ikhawuntari nayo isebenza njengendawo yokutyela. Ukugqitywa kokuboniswa kwathandwa, ukunceda ukwenza indawo ibonakale inkulu. Konke oku kudityaniswe nomgangatho ongwevu ongaphezulu kunye nesitayile semitha ye-wengue ukuyinika umahluko ngakumbi.
Ukongeza umbala oqaqambileyo kumbala wakho nawuphi na umphezulu, odityaniswe neekhabhathi ezimhlophe zekhitshi ziya kwenza kwangoko indawo yokugxila. Lo mzekelo ubonisa udonga oluqaqambileyo olu-orenji, olwenza ukuba likhangeleke likhanya kwisakhelo esikhanyayo esijikeleze isipili.
Kuyilo lwekhitshi lwanamhlanje, ukugqitywa kwentsimbi emhlophe kunye nentsimbi engenasiphelo zizinto ezisisiseko, njengoko zimele ukujonga okwangoku. Le khitshi yongeza i-twist encinci kwindibaniselwano yeklasikhi, kodwa ukongeza isibali esimnyama sebar ukongeza umahluko kwisithuba.
I-White akufuneki ihlale isetyenziselwa ngokukodwa okanye ikakhulu kwiikhabhathi zekhitshi ukwandisa izibonelelo zayo. Eli khitshi ngumzekelo obalaseleyo, njengoko iikhabhathi zasekhitshini ubukhulu becala zenziwe ngomthi weTeak, ngelixa zonke iikhabhathi kunye neekhabhathi zentloko zimhlophe. Ukulinganisela phakathi kweetoni zendalo kunye nokugqitywa okumhlophe okwangoku kwenza ukuba kubonakale kufudumele kodwa kujongeka.
Abasetyhini camo iringi yomtshato ebekiweyo
Oku kufana nokubuyela umva komzekelo wangaphambili, njengoko eli khitshi lincinci lisebenzisa iiplanga zomthi kwiikhabhathi ezingaphezulu endaweni yoko. Umbala we-oki omnyama wongeza ubushushu obufihlakeleyo kuyilo lwekhitshi oluncinci.
Ukongeza isuntswana lokwakheka apha naphaya kunokongeza ubukhulu kumakhitshi akho amhlophe onke. Lo mzekelo usebenzisa iithayile ezimnyama ezenziwe ngombala omnyama kwimigangatho emibini kunye nasemva kokubuyela umva, kunye nodonga olugxibisayo lwamatye ecaleni ukunika ubunzulu ngakumbi kuyilo olumhlophe lwekhitshi.
Indlela entle kunye noyilo lokongeza umbala kwiikhitshi zakho ezimhlophe zonke kukusetyenziswa kweewindows ezinkulu. Kweli khitshi, udonga lwasemva oluye lwaguqulwa lwangumfanekiso wefestile ngombono wommandla wephuli, uzisa imibala eqaqambileyo yephuli ngaphakathi.
Ukuguquguquka okumhlophe kubonisiwe kolu luyilo lwekhitshi oluncinci. I-Violet ngumbala oqaqambileyo odla ngokunxulunyaniswa nobukhosi / ubukhosi, kodwa kunokuba yinto enzima ukuyisebenzisa njengoko ingabonakali intle nayo yonke imibala. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba emhlophe yayisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini, iyakwazi ukudibanisa ngaphandle kokugagamela ezinye izinto zoyilo.
Iglasi eluhlaza okwesibhakabhaka ngombala oluhlaza okwenziwe ngasemva esetyenziswe kwi-backsplash ngokuqinisekileyo inika ulonwabo kunye nokudlala vibe kule khabhathi imhlophe yeemodyuli zasekhitshini ezimhlophe.
I-red-violet ngomnye umbala ekunzima ukusebenzisana nawo, kodwa ngenxa yephalethi emhlophe esulungekileyo esetyenziswe kwiikhabhathi zemodyuli, iyanceda ukuhla kwesibindi seendonga. Ukugqitywa kwamatte kwakhona kwakusetyenziselwa ii-laminates zekhabhinethi ukuyinika ukubukeka okuthambileyo.
Izikimu zemibala ye-Achromatic kulula ukusebenzisana nazo kwaye aziphelelwa lixesha. Ngeendawo ezinje ngekhitshi, lukhetho oluthandwayo nolusebenzayo lombala. Lo mzekelo usebenzisa iikhabhathi ezimhlophe / ezimhlophe ezicocekileyo ezidityaniswe nezixhobo zokubala ezimnyama kunye neekhabhathi ezingaphezulu.
Ibekwe kanye embindini wesithuba esincinci, le khitshi icwecwe lisebenzisa iikhabhathi ezimhlophe-ezinamacala amhlophe ukunika inkohliso yendawo enkulu. Uya kubona kwakhona iipopu ezimbalwa zerds ezisetyenzisiweyo kwizixhobo zefenitshala, kunye nesilayidi esimnyama esimnyama ukongeza umahluko kumphezulu.
Umzekelo omkhulu woyilo oluphefumlelweyo lwe-Nordic, eli khitshi liyakwazi ukudibanisa ngaphandle komthungo ukubukeka okucocekileyo koyilo lwangoku kunye nobushushu bezinto ezigqityiweyo zendalo, kudala ukujonga okulula kodwa okuhle ekhitshini. Iikhabhathi zemodyuli zilaminishwe ngombala omhlophe kwaye zinee-countertop zomhlaba eziqinileyo ezimnyama. Inemvelaphi yemaple efudumeleyo entle enceda ukuthambisa imiphetho elukhuni yesilhouette yanamhlanje. Ndwendwela eli phepha ukubona okungakumbi iikhitshi ezincinci ezineekhabhathi ezimhlophe .
ndingalitshintsha ifani ndingatshatanga?
imisebenzi yeshawari yomtshato ingekho imidlalo
niches imibono yokuhombisa
izimvo zesipho somtshato somtshakazi nomyeni abanayo yonke into
uyakha njani iarch yomtshato